Dadka isaga socdaala Midowga Yurub oo ku sugan xaalad darxumo ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka isaga socdaala Midowga Yurub oo ku sugan xaalad darxumo ah
La daabacay måndag 13 januari 2014 kl 14.06
Hadda qabowgii si ba’an u soo dhacay, dad badan ayaa ku nool marxalado adag. Xaafadaha ku yaal magaalooyinka waaweyn daafahooda waxaa ku soo batay xeerooyin joogto ah oo ay ka sameysteen dad soogalooti ah oo ka kala yimid dalal ka tirsan Midowga Yurub. Taasna waxaa ku kallifay iyadoo ay adkaatey in boosas laga helo guryaha ku meelgaarka ah oo lagu magacaabo Vinternatt looguna talagalay dadyowga saboolka ah ee isaga socdaala dalalka Midowga Yurub.
Mid ka mid ah xeryahaasi waxay ku taal xaafadda Högdalen oo ku taal koonfurta Stockholm. Xeradaas oo ah degaan buulal ka sameysan ayaa ku ag taal waddada tareenadu maraan. Waxaana halkaask u nool dad tiradoodu dhan tahay ilaa 100 qof oo guryo ka sameystey buulal iyo guryaha yaryar oo gawaaridu jiiddo. Xaaladda ay ku sugan yihiin dadka xerada Högdalen waxaa lagu sifeyn karaa oo qura xaalad darxumo baaxad weyn. Sidaas waxaa ku sifeysey idaacadda ABC ee telefishanka SVT oo goobtaas booqasho ku tagtay.
Wargeysi qoraal ah oo uu Raadiyaha Iswiidhen u diray maamulada degmooyinka dalka bilihii Noofember iyo Diseember, ayey ku soo jawaabeen 67 degmo in ay degmooyinkooda ku sugan yihiin daad soogalooti ka soo socdaalay dalalka Midowga Yurub. Sagaal qura oo degmooyinkaas ka mid ah ayaa ku jawaabey in ay yahaan meelo ay dadkaas ku soo dhoweeyaan.
Bartamaha magaalada Stockholm waxaa maalmahaan guryaha kaniisadda Filadelfia laga furayaa hoy degdeg ah oo dadkaas lagu soo dhoweeyo, oo 58 sariir loogu diyaarinayo.